Warbixin laga soo saaray maanta wadooyinka ugu shilalka badan dalka – The Voice of Northeastern Kenya
Warbixin laga soo saaray maanta wadooyinka ugu shilalka badan dalka
Warbixin laga soo saaray shilalka gawarida iyo wadooyinka ugu badan oo ay ka dhacaan ayaa lagu sheegay in wadada Thika Superhighay ay hogaanka u qabatay wadooyinka ay intabadan shilalka baaburta ka dhashaan.
Warbixintan oo ay maanta oo khamiis ah soo saaren laanta qaran ee badbaadada wadooyinka ee magacooda lasoo gaabiyo NTSA ayaa shegtay in wadooyinka kale ee soo raaco ay kala yihiin Wadada Mombasa, Waiyaki Road, iyo Eastern Bypass.
Waxaa la sheegay in inkabadan 1,500 oo qof ay ku dhinteen shilalka gawaarida laga soo bilaabo horaanti sanadan 2016-ka taaso sare u kac kuyimid 1.5 boqolkiiba marka labar bar dhigo sanadkii ka horeeyay ee 2015-ka.
Dadka dhintay ayaa agaasimaha laantaasi waxaa uu ku sheegay in ay yihiin 614 qof oo ah dadka wadooyinka kulugeeya tiradaasi oo ah mid aad u sare kacday, 388 ayaa waxaa ay ku dhinteen mootooyinka halka 347 qofka ee dhintayna ay yihiin dadka rakaabka ah.
Mas’uulkaasi ayaa intaa kudaray in goobaha ay sida aadka ah ugu badan yihiin shilaka gawaarida ay tahay meelaha ay dadka ay kutiro badan yihiin.
Countiga Nairobi ayaa la sheegay in ugu badan yihiin shilalka gawaarida oo lagu qiyaasay 16.3 boqolkiiba halka Nakuru iyo Kiambu ay yihiin countiyada kuxiga balse NTSA ayaa intaas kudartay in Countiga Wajir u yahay countiga kali ah ee aan laga soo tabinin shil baabur.
NTSA ayaa xustay in maalmaha ay intabadan dhacaan shilalka ay tahay maalinta sababtida ah.
Maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa dalka si aad ah ugu soo badanayay shilalka gawaarida oo ay tiro dad ah ku dhimanayeen.
← Golaha wasiirada oo meel mariyay in la soo saaro shidaalka ceyriinka ah ee laga helay Turkan
Dowlada Turkiga digniin adag oo la xariirta Qoxootiga u dirtay Midowga Yurup →